Esi kpochapu ndanda na griin ha, ụzọ kacha mma ị ga - esi merie ụmụ ahụhụ - Nchịkọta pesti - 2019
Mgbochi na greenhouse: nkọwa nke pests na otu esi kpochapụ ha
Ugbo siri ike dika ichikota obughi nani n'ime oke ohia, kamakwa n'ime ugbo, nakwa na griin ha, dika ha puru ichota nri di iche iche dika ulo. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe nile ka ndị bi na okpomọkụ na-abanye mgbe nile, ya mere, n'okpuru ebe a, anyị ga-amụ ajụjụ banyere ụzọ esi tufuo ndanda na griin ha.
Kedu uru nke ndanda
Kedu ihe ndị dị ize ndụ na kịtịre
Esi esi edozi ndanda na griin ha
Ihe omume nke imegide ndanda
Otú e si emeso ọgwụ ants pụtara
Ikwusi ndogwu ndi ogwu
Kedu ihe osisi na-eme ka ọ ghara ịnwụ
Nnukwu ihe: mkpofu mmiri site na kemịkal ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Esi egbochi ndanda ịbanye na griin ha, igbochi
Ant: nkọwa na ndụ ndụ nke pesti
Ants bụ ụmụ ahụhụ na-ebi na nnukwu ìgwè, mgbe ha na-ahazi nnukwu ụlọ, anthills. Na otu na-emekarị ka ọ bụrụ otu eze nwanyị, nke na-emepụta usoro ịtọba àkwá. Ants ndị ọzọ niile na-eji ọrụ na-achịkọta "ihe onwunwe ụlọ" maka nsogbu ha, yana nri. Ọ bụ n'ajụjụ nke abụọ na ụmụ ahụhụ ndị a na-etinye ihe ize ndụ nye ndị na-elekọta ubi, n'ihi na ha na-achọ iri mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, akwụkwọ nri na akwụkwọ nri akwụkwọ. Ọgbọ ọhụrụ nke ndanda na-apụta ngwa ngwa - ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ ọ bụla. Iji mee nke a, eze nwanyị na-ebu ụzọ tinye nsen, bụ nke maka ụbọchị iri atọ na ise na-agagharị na mpaghara aisle, mgbe nke ahụ gasịrị, larvae na-apụta site n'aka ha. Ụzọ ndụ ha dịkwa mkpụmkpụ, naanị ụbọchị 7, mgbe e mesịrị, a na-ejikọta larvae na nzuzo ha ma ghọọ nkae. Naanị na nke anọ, obere ogwu na-apụta site na pupae, nke na-eto ngwa ngwa ma na-amalite ozugbo ịrụ ọrụ ụfọdụ.
Ị ma? Anụ nwere ike iji akara aka na-esi ísì ụtọ na-eme ka ha jiri aka ha na-eme njem nlegharị anya, na-ekele ha mgbe ha na-alaghachi na mgbochi ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ike ịchọta ebe ha hụrụ ọtụtụ "anụ". Iji gbochie ụzọ nke pests, na griin haus ọ dị mkpa iji gbasaa pungent ísì nke garlic, Mọstad, Mint.
Okwesiri iburu n'obi na n'etiti ndanda nwere otutu ihe di iche iche, ma otutu mgbe ha no n'ubi na ubi greenhouses enwere nani:
acha uhie uhie (a na-achọtakarị n'ụlọ, nke dị n'akụkụ oké ọhịa);
nwa ogige, nke nwere ike ịchọta na greenhouses na nke ukwuu mebiri na-eto eto osisi seedlings;
ala ahịhịa agba (obere nkịtị na greenhouses).
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na isiokwu nke isiokwu anyị na-etinye aka na ajụjụ banyere ụzọ esi kpochapụ ndanda na griin ha, onye ekwesịghị izere uru nke obere ụmụ ahụhụ ndị a. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ha pụtara na griinye gị, ọ ga-ekwe ka:
Bibie ọtụtụ pests nke osisi ugbo, dị ka caterpillars, ofufe larvae, slugs na udide mites, dị ka pests ndị a nri ndanda.
Mee ka ọmụmụ ala dịkwuo mma, dịka ọtụtụ nnwale anwụrụ ga-eme ka mgbidi ya dị ka ihe rụrụ arụ na ikuku dị ka o kwere mee. N'adịghị ka ụwa, ndanda nwere ike ịbanye n'ime ala ma ọ bụghị 20cm, ma site na 1.5 mita.
Iji meziwanye uru bara uru nke ala, ebe ọ bụ na ọdịnaya potassium dị na ya na-abawanye site na ugboro abụọ na nhụjuanya nke ndanda, na nke phosphorus na-abawanye site n'ihe dị ka ugboro iri. Nakwa usoro ndụ nke ndanda na ala humus na nitrogen pụtara. Ọ dị ezigbo mkpa na ihe ndị a nile n'okpuru nduzi nke ndanda ga-aghọ ụdị soluble dị mkpa maka ihe oriri na-edozi ahụ.
Ọ dị mkpa! Ntughari ngwa ngwa nke ndanda na griin ha bu eziokwu na obuna na onodu ozo di n'èzí ihe nkiri ahu, ebe di mma na mmiri zuru oke ga-adi n'okpuru ihe nkiri. Ya mere, mgbe owuwe ihe ubi nke mgbụsị akwụkwọ, ọ dị mkpa imepe griin ha ma kwe ka ntu oyi mbụ mee ka mmiri dị n'elu n'elu ala nke nwere ike ịchekwa àkwá nke ndanda.
Mgbochi na griin ha bara uru nanị ma ọ bụrụ na ógbè ha enwebeghị ọtụtụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ndanda na griin ha na-amụba ngwa ngwa, ajụjụ gbasara ụzọ isi kpochapụ ha dị ngwa ngwa. Kedu ihe nwere ike ịdị ize ndụ ụmụ ahụhụ ndị a?
Ants nwere ike ịchọta ụdị acid, nke nwere ike ime ka acidity dị elu ngwa ngwa. Dị ka ị maara, ọ bụghị osisi niile dị n'ubi dị ka ala ndị a, nke na-enweta ezigbo ihe ọkụkụ ga-esi ísì.
Nri nri nke ndanda abughi nani ihe di iche iche di iche iche di iche iche, ma ndi omechapu nke osisi ubi, tinyere nkpuru ha di nma. Ya mere, site na mmepụta dị ịrịba ama nke ezinụlọ ant, griin ga-enwe ike imerụ ya ahụ ma ghara ịgha mkpụrụ.
Ants ndị okenye na-atọ ụtọ shuga, nke dị mkpa maka ndụ ha, n'ihi ya, ha nwere ike ịmepụta agbụrụ dum nke aphids. Nri a nwere ike, n'aka nke ya, gbasaa ma na-eri nri na osisi ugbo, si otú a na-ewetara ihe ọkụkụ ahụ na-enweghị ihe ọ bụla, na mgbe ụfọdụ ọbụna mbibi zuru oke nke osisi.
Ants nwere ike ịhazi ha anthills kpọmkwem n'etiti ahịrị greenhouse osisi, si otú ahụ na-egbochi ha na-eto eto kwesịrị.
Ebe ọ bụ na ebe obibi nke ndanda na-ejedebe nanị na griin ha, ha nwere ike ibute mkpụrụ osisi ahịhịa n'ime mkpọmkpọ azụ ha, bụ, na ọnọdụ dị mma, na-eto ngwa ngwa ma na-emepụta ihe ọkụkụ n'ubi.
Ma, ma e wezụga nhụsianya, maka griin ha n'onwe ya na osisi na-eto na ya, ndanda nwere ike bụrụ ihe ize ndụ maka ụmụ mmadụ. A sị ka e kwuwe, ọ ga-esi ike izere nsị ha, bụ mgbe ụmụ ahụhụ na-ahapụ ihe nzuzo nzuzo ụfọdụ. E wezụga na eziokwu dị otú a bụ ihe na-egbu mgbu, na ụfọdụ ndị ọ nwere ike ịkpata mmeghachi omume.
Ọ dị mkpa! Anụ na-adakarị njọ ebe mmiri dị ukwuu. Ya mere, ọ bụrụ na a nọgidere na-ekpo ọkụ dị elu na griin ha ma na-eme ka osisi na-eme ka mmiri sie ike, a ga-akwụsị ọrụ nke ndanda.
N'iburu n'uche na nsogbu site na ndanda na griin ha bụ ọtụtụ ugboro karịa mma, ọ ka dị mma ịlụso ụmụ ahụhụ ndị a ọgụ, kama ịgba ume mmepụta ha ọzọ. N'okpuru ebe a bụ ụzọ ole na ole dị irè ga-agwa gị otu esi edozi ndanda na griin ha.
Ya mere, ọ bụrụ na ndanda apụta na griin ha ma ị maghị ihe ị ga-eme, mgbe ahụ nke mbụ, ọ bara uru ịnwale ụzọ mgbochi nke ịchọta ha. Nke mbụ, kwa afọ, ọ dị mkpa ka ị kpoo ala ka o wee laa ndị anthills n'iyi ma mebie ntanye ha. Nke abuo, iji kpasuo mmebi ndia nsogbu, karia, mgbe o bula nwu ala, fesa ala na oku. Ants anaghị amasị sime na mmiri soda, nke na-amanye ha ịhapụ ebe obibi ha.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeri ants n'oge gara aga, gbanye ala dum na ngwọta soda na mmanụ flaxseed tupu ị kụrụ osisi ọzọ na griin ha (5 g nke soda na 30 g mmanụ chọrọ maka lita 1). Ọtụtụ mgbe, mgbe ọgwụgwọ dị otú ahụ, ụmụ ahụhụ na-ahapụ griin ha ruo ogologo oge.
Ị ma? E nwere ngwaọrụ ultrasonic pụrụ iche nke a na-ekwu na ọ nwere ike ịmepụ ndanda. N'ezie, ụdị ihe ndị a nwere ike imebi anwụnta na aṅụ ndị nwere akụkụ ahụ. Ma maka ndanda, ha enweghị ihe ọ bụla na-adịghị njọ, ebe ọ bụ na isi ihe ha na-eme na mbara igwe bụ ísìsì.
Ọ bụ maka ịmepụta azụ dị iche iche, na-emeghachi omume nke ndanda ga-ekpughe onwe ha n'ihe ize ndụ mmadụ. Otu n'ime ụdị dị iche iche dị otú a bụ boric acid, nke a na-atụgharị 1 teaspoon na iko mmiri tinyere 4 teaspoons shuga na otu ego nke jam. Na-etinye ụdị nri ahụ n'ebe ndị ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndanda, site na mgbede, ọ ga-ekwe omume iburu iko zuru ezu nke ụmụ ahụhụ na-eri. N'ihi nke a, ị na-agbanwe iko ahụ na nsị ga-enwe kwa ụbọchị.
Usoro a na-enye gị ohere ịchọta ọbụna eze nke ndanda. Maka nke a, ọ dị mkpa iji nnukwu ihe dị nro, dị ka ígwè ma ọ bụ plastik, ma kpuchie ya na otu ákwà mkpuchi. Ngwakọta zuru ezu na shuga sirop, ị ga-amanye ndanda tinyere akpanwa ịkwaga na tray, mgbe nke a gasịrị ị pụrụ ịtụfu ha na ebe ọzọ dịka o kwere mee site na griin ha.
Ka ị ghara iji ọrụ kemịkal ma ghara inyekwuo ndanda na shuga, ọ dị mkpa ịmara otú e si ewepu ndanda si na griin ha na ọgwụ ndị mmadụ. A ghaghi icheta na ndanda anaghị anabata odidi ọjọọ na wormwood, garlic, mọstad, anise na ọbụna laurel doo emit. Ya mere, ọ bụrụ na ị decompose mkpịsị akwụkwọ a nile na griin haus, n'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ịhụ otú ọnụ ọgụgụ ndanda si arịwanye elu n'ike.
Mana ndi mmadu ndi ozo di irè maka ndanda na griin ha bu garlic, nke a na akwadoro ka igbari ma tinye mmiri n'ime ubochi. Obere ihe dị otú ahụ dị mkpa iji mee ka mmiri sie ebe ebe nkpọkọta ìgwè nke ndanda, site na ebe ha ga-agba ọsọ n'akụkụ niile ọ bụla, ọ ga-ekpebikwa ịlaghachi n'oge na-adịghị anya.
Ụfọdụ osisi na-agbasa otu isi ísì na-enyere aka ịlụ ọgụ. O doro anya na ka ị na-atụ ụjọ na ị gaghị eto wormwood ma ọ bụ galik na griin haus, mana ị nwere ike ịkụ ọtụtụ seedlings na tomato ma ọ bụ cucumbers:
Ọ dị mkpa! Iji bibie ndanda na griin ha, o di nkpa iwepu isi ihe kpatara nsogbu a - nwanyi eze ha. Maka nke a, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị igwu ala, kamakwa iji nyocha ya nke ọma iji chọpụta ihe ka ukwuu nke ant nke na-etinye nsen.
Ịlụ ọgụ na griin ha na ọgwụ ndi mmadu na ichuchapu ha na osisi ndi nwere odiri ajuju adighi adi mgbe obula choro ya, ya mere ndi bi n'oge okpomọkụ aghagh i eji ogwu ndi ozo. N'iburu eziokwu ahụ na ha nwere ike imerụ ọ bụghị nanị na ndanda, kamakwa osisi ndị dị na griin haus, ọ bara uru itinye ihe a nanị ma ọ bụrụ na ụmụ ahụhụ nwere ike ibibi ihe ubi ahụ kpamkpam.
Dị ka ọgwụ ndị a na-atụ aro iji:
Ọ bụrụ na eji ọgwụ ndị ọzọ enye gị ọgwụ, chọpụta ma ọ bụrụ na ha nwere diazinon, bụ nke na-egbu ndị anwụrụ. Otú ọ dị, mgbe ị na-eji ọgwụ ọ bụla eme ihe iji lụọ ọgụ, echefula na ha nwere ike ịdị ize ndụ nye gị.
Mbibi nke ndanda na griin ha anaghị adị n'otu oge, n'ihi usoro mmepụta ngwa ngwa, ọtụtụ ọgbọ ọhụrụ nke ụmụ ahụhụ ndị a nwere ike ịpụta. Na nke a, ọ dị mkpa ịmara ọ bụghị naanị ụzọ mkpochapụ nke ndanda, kamakwa ụzọ dị irè nke igbochi. Karịsịa, ọ dị ezigbo mkpa iji iwepụ ihe niile fọdụrụ na mbadamba ihe ochie na ihe ndị dị n'elu ụlọ, n'ime na n'okpuru ya ka ndanda nwere ike ịdị ndụ ma mụbaa. Tụlee na ha nwere ike ịbanye na nkwenye nke griin ha, nke site n'oge na-agarịrị abawanye ma malite ịba. Echefukwala ka ị na-egwu ala kwa afọ ma tinye ụdị nri dị iche iche n'ime ha, bụ nke dị na elu dị elu nwekwara ike inwe mmetụta ọjọọ na ndanda.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ọ nweghị ụzọ dị elu nke iguzogide ndanda na-adabara gị ma ọ bụ na enyere gị aka, ị nwekwara ike ịkpọtụrụ ọrụ ntanetị nwere ike iji nyere aka. Ndị ọkachamara ga-enye aka naanị iji kpochapụ ndanda okenye, ma ha ga-agwa gị ebe ha si na saịtị gị na ụlọ griin.
Ajụjụ gbasara otu esi esi edozi ụmụ ahụhụ na nsị na griin ha, ike agwụla anyị, n'ihi ya n'oge ọzọ, ị nwere ike ichefu ụdị ụmụ ahụhụ ndị na-asọ oyi na-emebi ihe ọkụkụ ahụ. Otú ọ dị, ị ga-ekpochapu ha, echefula ụzọ mgbochi, dị ka ndanda nwere ike ile griinye gị si n'ubi gbara ya gburugburu.
Ụzọ nile nke ịzụlite Croton (codiac) n'ụlọ
Enwere ike itolite celery n'ụlọ na windowsill?
Esi tufuo akụrụ akụrụ na currants
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Mgbochi na greenhouse: nkọwa nke pests na otu esi kpochapụ ha